तथ्याङ्क अनुसार: कुन निर्वाचनमा कति मतदाता ? | Nepal Ghatana
तथ्याङ्क अनुसार: कुन निर्वाचनमा कति मतदाता ?
प्रकाशित : १४ चैत्र २०७८, सोमबार ०६:२२
निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने मतदाताको अन्तिम नामावली आइतबार सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगका अनुसार आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने कुल मतदाताको संख्या १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ रहेको छ । कुल मतदातामध्ये पुरुष ८९ लाख ९२ हजार १० जना, महिला ८७ लाख ४१ हजार ५३० जना र अन्य १८३ जना रहेका छन् ।
नेपालमा भएका प्रत्येक निर्वाचनमा अघिल्लोमाभन्दा पछिल्लो निर्वाचनमा मतदाताको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । २०७० सालमा सम्पन्न संविधान सभा सदस्यको लागि भएको दोस्रो निर्वाचन भने अपवादमा पर्छ । किनकी यो निर्वाचनमा अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचनमाभन्दा मतदाता संख्या घटेका थिए ।
नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन (संसद) २०१५ सालमा भएको थियो । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार उक्त आम निर्वाचनमा कुल मतदाता ४२ लाख ४६ हजार ४६८ रहेका थिए ।
आम निर्वाचन २०१५ फागुन ७ गतेदेखि सुरु भई अन्तिम परिणाम २०१६ वैशाख २८ गते प्रकाशित भएको थियो ।
२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि २०१५ सालमा भएको प्रथम आम निर्वाचनमा ४२.१८ प्रतिशत मतदाताहरूले मतदान गरेका थिए ।
तत्कालिन राज महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते बहुदयिलय व्यवस्था खारेज गरेका थिए । त्यसपछि उनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरेका थिए । पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलन चर्केपछि २०३७ सालमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह गरिएको थियो ।
जनमत संग्रहमा कुल मतदाता ७१ लाख ९२ हजार ४५१ रहेका थिए । जनमत संग्रहमा ४८ लाख १३ हजार ४८६ (६६.९२ प्रतिशत) मत खसेको थियो । खसेको मतमध्ये ३ लाख ७२ हजार ०६९ (७.६ प्रतिशत) बदर भएको थियो ।
जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा कुल २४ लाख ३३ हजार ४५२ (५४.७९) मत खसेको थियो भने बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा कुल २० लाख ७ हजार ९६५ (४५.२१) मत खसेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा नेपालका तत्कालिन ७५ जिल्ला मध्ये १९ जिल्लामा बहुदलीय पक्षमा धेरै मत खसेको उल्लेख गरिएको छ । बहुदलिय पक्षमा बढी मत खसेका जिल्लामा मोरङ, सुनसरी, सिराहा, उदयपुर, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, रौतहट, कास्की, रूपन्देही, पाल्पा, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, डोटी, कञ्चनपुर र डडेलधुरा रहेका थिए । अञ्चलका दृष्टिकोणले भने १४ अञ्चलमा नै सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था विजयी भएको थियो ।
२०४६ सालमा देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापन भएपछि २०४८ सालमा आम निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७७७ मतदाता रहेका थिए । २०५ स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ११० ठाउँमा जितेको थियो ।
नेपालमा पहिलो स्थानीय निर्वाचन २०४९ सालमा भएको थियो । सो निर्वाचनमा कूल मतदाता १ करोड २० लाख रहेका थिए । कुल ३ हजार ९९५ गाउँ विकास समिति र ३६ नगरपालिकाहरूमा निर्वाचन गरिएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेपछि २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो । मध्यावधि निर्वाचनमा कूल मतदाताको संख्या १ करोड २३ लाख २७ हजार ३२९ रहेको थियो । उक्त निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेले ८८ सिट जिती संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।
२०५४ सालमा नेपालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । दुई चरणमा भएको उक्त निर्वाचनमा कूल मतदाता संख्या १ करोड २५ लाख ३८ हजार २७३ रहेको थियो । त्यसपछि २०५६ सालमा आम निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार सो निर्वाचनमा १ करोड ३५ लाख १८ हजार ८३९ मतदाता रहेका थिए ।
२०५६ सालको आम निर्वाचनपछि देशमा धेरै राजनीतिक उतारचढाव आयो । तत्कालिन राज ज्ञानेन्द्र शाले २०६१ माघ १९ गते ‘कू’ गरी सत्ता हातमा लिए । राजाको कदमविरुद्ध २०६२÷६३ मा जनआन्दोलन भयो र राजाले संसद पुनस्थापना गरे । त्यसपछि संसदले राजसंस्था खारेज गर्यो । सशस्त्र संर्घष गरिरहेको माओवादी हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आयो ।
माओवादीलाई समेत समेटेर २०६४ सालमा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन गरिएको थियो । संविधान सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कुल मतदाता सङ्ख्या १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ रहेको थियो । यस मध्ये महिला मतदाताको सङ्ख्या ८७ लाख ३० हजार ३९० र पुरुष मतदाताको सङ्ख्या ८८ लाख ८१ हजार ४३९ थियो । यो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जिती तत्कालिन नेकपा माओवादी संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।
पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० सालमा संविधान सभाको लागि दोस्रो निर्वाचन भएको थियो । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा कुल मतदाताको सङ्ख्या १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ रहेको थियो । कुल मतदातामध्ये ५९ लाख ८० हजार ८८१ जना पुरुष, ६१ लाख ६६ हजार ८२९ जना महिला र १५५ जना तेस्रो लिङ्गी रहेका थिए । यो निर्वाचन मार्फत संविधान सभा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।
दोस्रो संविधान सभाले २०७३ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरेपछि २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन गरिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मा कुल मतदाता १ करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ रहेका थिए । कुल मतदातामध्ये पुरुष ७० लाख ७९ हजार १५३, महिला ६९ हजार ९३ हजार १२७ र तेस्रो लिङ्गी १४४ जना रहेका थिए ।
२०७४ सालमा नै एकसाथ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन गरिएको थियो । सो निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्या १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ रहेको थियो । कुल मतदातामध्ये ७७ लाख ७६ हजार ६२८ पुरुष, ७६ लाख ५१ हजार १४३ महिला र १६७ तेस्रो लिङ्गी रहेका थिए । उक्त निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जित्न नेकपा एमाले सफल भएको थियो ।